ရန်ပိုင်| December 25, 2012 | Hits:16,828
အမေရိကန် အကူအညီဖြင့် နိုင်ငံပိုင် မြန်မာ့ လေကြောင်း လေယာဉ်များ ၀ယ်မည်
6 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website yemyn December 25, 2012 - 3:17 pm	Every airline in Myanmar must be careful and lesson learned for other air lines.Every passengers life in your air lines hand.(Safety first before flight and choice the good quality pilot).
တပ်မတော် ရဟတ်ယာဉ် ပျက်ကျပြီး ၃ ဦး သေဆုံး
မင်္ဂလာဈေး အသစ်တည်ဆောက်ရေး တိုင်းလွှတ်တော် ဆုံးဖြတ်ချက်ယူမည်
လူအများ ဂရုမပြုမိသည့် လက်တကမ်းက ကြောက်စရာအန္တရာယ်
ရနောင်းတွင် ကားတိုက်ခံရမှုကြောင့် သေဆုံးသူ မြန်မာ ၆ ဦးအထိ ရှိလာ
စစ်တွေရှိ် ဘင်္ဂါလီ ဒုက္ခသည်စခန်း မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား
မန္တလေး မင်္ဂလာဈေး မီးလောင်မှု အကြောင်းရင်း ယနေ့အထိ မသိရှိရသေးဟုဆို
ရခိုင်မှာ လှေမှောက်ပြီး ကလေးငယ် ၁၀ ဦးအပါအဝင် ၁၈ ယောက် သေဆုံး
FMI လေယာဉ် စက်ချို့ယွင်းသော်လည်း ပြန်တက်ရန် ကြိုးစား